Maxaa ka Soo Baxay Kullankii Qolka Jwxo-shiil June 4, 2010? – Rasaasa News
Jun 8, 2010 2010?, Maxaa ka Soo Baxay Kullankii Sariirta ee Kooxda Jwxo-shiil June 4, ONLF
Kooxda Kadeedan ee kurbadu hayso walina ka amar qaadata Jwxo-shiil, kuwooda ugu kaska daran ayaa kula kulmay Jwxo-shiil, qolka ay sariirtu u taal, ka dib kolkii uu u yeedhay. Labada nin ayaa ugu cad cadaa ururka ONLF xiligii uu Dr Dolal noolaa ee uu ururk onlf higsanayey hami xornimo. Koox ay ka mid ahaan jireen Macalinka iyo Abtidoon ayaa ahaa dhufayskii loo galay burburinta ururka ONLF iyo waliba dilkii Dr M S Dolal oo ay saaxiib aad isugu dhaw ahaayeen.
* Labadan nin kolkii ay imanyeen qolka uu seexdo Jwxo-shiil, waxaa weheliyey mid ka mid masuuliyiinta Qolka Kaniisada Jaaliyada Jwxo-shiil, oo kolkii dambe noo soo gudbiyey warkan.
Jwxo-shiil, ayaa kolkii sallaan waydsan la isa salaamay koobab shaah ah oo aan kululayn cadayskana laga badaiyey laba laba goor la ka baday, soo bandhigay su,aal ku saabsan wixii uu ugu yeedhay, maadaama oo laga quustay telefoonada waayo ruux umaabaa si uun u maqli xitaa caruurtooda ayey ka baqaan.
Halgameyaal idinka ayaa muhiim ah oo igala jooga golihii dhexe waxaan idiinku yeedhay, Maxaynu ka yeelaa ONLF sida socota way burburaysaaye?
Macalin Diirane, oo ay aad uga muuqato diiraanyo badan iyo daal xilgana ruqe ah, ayaa waxaa uu kaga jawaabay ONLF horay ayay u burburtay, wuuna naga qumanaa kolkii uu Dr. M S Dolal lahaa ONLF way burburaysaaye ha la bad baadiyo. Waxayna u sii dhamaatay ururka ONLF kolkii Dr. Dolal rag aan agtiisa ka hadli jirin loo baneeyey in ay qori ku fiiqaan, hadalkaas oo uu micnihiisu yahay waxaanu kuu ogolaanay in aad disho Dr Dolal.
Maadey ayaa isagu su,aashaas kaga jawaabay waa in si xoog leh looga qayb galaa banaanbax ka dhicidoonab the Heeg [the Netherlands], in la sameeyo gudi abaabul oo dadka wacyi galisa oo dhaqaale uruurisa, Maadey ma fahmin micnaha su,aasha Jwxo-shiil.
Maadeey oo ka dhacsan is fahamka labad duq, ayaa Su,aal 2aad oo rajo galisay Jwxo-shiil meesha soo dhigay oo ahayd; Maxaynu ka yeelaa Salaxudiin hadalka uu sheegay ee ah in uu heshiis la galayo Itobiya arintan oo keeni karta in uu ciidan badan dadweynaba hello oo uu 2:o ina diro?
Jwxo-shiil, ayaa ku jawaabay kalsooni wayn baan ku qabaa ciidanka iyo taageerayaasha in ayna Salaxudiin raacaynin Itobiyana way ogtahay in uusan Salaxudiin ciidan haysanin.
Maadeey, waa in la wargaliyaa CWXO inta inaga ina taageersan, waana in si wanaagsan loogu sharxo taageerayaasha in Salaxudiin tagidiisa Itobiya ay halganka guul u tahay uuna inagala hadhi uun dhibaatadii uu inagu hayey maalin iyo habeen.
Jwxo-shiil iyo Macalinku way is uur garanayeen in aan wanaag dhinayna way ogg yihiin, Maadeeyse waxaa uu wali hunguri ka hayaa in uu ONLF wax ka noqdo, [Maadeeye wuxuu ka dhigan yahay ninkii hadalka sugayey ee kii ka horeeyey hoolka looga kala tagay, kolkii la waydiiyey qolka waa laga kala tagaye yidhi ninka hadlayaan ku xigaa].
* Ninka noo soo gubiyey warka oo ka socday Qolka Kaniisada Jaaliyada Jwxo-shiil, ayaa ku cataabay waligay sabtigii ayaa iigu horaysay in uu run yahay in kooxdani ay ka dambaysay dilkii Dr. M S Dolal.
Waxaa kale oo aan todobaadakan idiin haynaa warar iyo xogo muhiim ah oo ku saabsan Jwxo-shiil.